‘सेक्स’ बारे पुरुषमा सधै हुन्छ यस्तो भ्रम! – Health Post Nepal
‘सेक्स’ बारे पुरुषमा सधै हुन्छ यस्तो भ्रम!
२०७७ फागुन २४ गते १९:१२
सेक्स अझै पनि समाजमा संकुचनको विषय नै छ। धेरै मानिस सेक्स बारे खुल्न चाहदैनन्।
यसै कारण पनि सेक्सलाई लिएर मानिसको मनमा धेरै भ्रम र धारणा हुन्छन्। पुरुषमा पनि यस विषयमा धेरै भ्रम रहेको पाइन्छ।
पुरुषमा हस्तमैथुन, स्वप्नदोष, चाडो उत्तेजित हुनु, लिंगको लम्बाई, लिंग बाङ्गो हुनु, विर्यको मात्रा आदि थुप्रै विषयमा भ्रम रहेको पाइन्छ। जसले गर्दा उनीहरूको मनमा सेक्सलाई लिएर नकरात्मक भावना पैदा भइरहेको हुन्छ। तर, त्यस्ता भ्रममा रहनु हुँदैन।
हस्तमैथुनलाई लिएर आज पनि मानिसको मनमा थुप्रै गलत धारणाले जरा गाडेको छ। शोधका अनुसार हस्तमैथुन पूर्णरूपमा सुरक्षित र सामान्य प्रक्रिया हो।
यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। पुरुषको शरीरमा वीर्य उत्पादन भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई बाहिर निस्किनु पनि आवश्यक हुन्छ।
हस्तमैथुन गर्दा वीर्य बाहिर निस्किन्छ। र, सेक्स गर्दा पनि वीर्य नै बाहिर निस्किने हो। असुरक्षित यौन सम्पर्क भन्दा हस्तमैथुन निकै सुरक्षित हुन्छ।
हस्तमैथुन वा सेक्स नगर्दा निन्द्रामा कामुक सपना देखिन्छ। र, सुतेको समयमा वीर्य स्खलित हुन्छ। जसलाई हामीले स्वप्नदोष भन्छौं। यो युवावस्थामा सबैमा हुने सामान्य प्रक्रिया हो।
कामइच्छा हुँदा मानिसले हस्तमैथुन गरेर आफ्नो इच्छा पुरा गर्नसक्छ।
यस्तै कुनै सुन्दर युवतिलाई देख्दा वा टेलिभिजनमै देखेर पनि पुरुष उत्तेजित हुनसक्छ। यो पनि सामान्य कुरा हो। यो बिचार महिला पुरुष दुबैमा आउन सक्छ।
यस्तो हुँदा पुरुषको लिंग उत्तेजित हुने र महिलाहरूको यौनी रसाउने हुसक्छ। सेक्सबारे कम जानकारी हुने भएकाले मानिसहरू अरुप्रति यस्तो धारणा बनाउनुलाई पाप ठान्छन्। यो सामान्य कुरा हो। र, मानिस सेक्सुअल रुपमा तन्दुरुस्त छ भन्ने हो।
यस्तै पुरुषमा लिंगको आकारलाई लिएर पनि भ्रम हुनेगरेको पाइएको छ। यो मानिसको जिनमा निर्भर हुने कुराहो। प्रत्यक पुरुषको लिंगको आकार फरक हुन्छ।
४ सेन्टिमिटरको लिंगले पनि महिलालाई चरम सन्तुष्टि दिनसक्छ। महिलाको यौनीमा ४ सेन्टिमिटरसम्मको भागमा मैथुनबाट आनन्द लिने स्नायु हुन्छन्।
त्यसैले लिंगको आकारलाई लिएर कुनै भ्रम मनमा राख्नुभन्दा यौन सन्तुष्टितिर ध्यान दिनुपर्छ। यदि पुरुषको लिंगको साइज ६ देखि ८ सेन्टिमिटर भए महिलाले चाडो चरमसुख लिने र गर्भाधारण हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
लिंग लामो हुँदा बाङ्गो हुनसक्छ। यसलाई लिएर पनि मानिसले चिन्ता गरिरहेका हुन्छन्। यसमा कुनै चिन्ता लिनु हुँदैन। मानिस पुरै उत्तेजित हुँदा लिंगको साइज लामो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा थोरै बाङ्गो हुनसक्छ। यसमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र, यसले सेक्समा कुनै असर गर्दैन।